Wararkii ugu dambeeyay ee dalka Afghanistan oo weli uu ka socdo daadgureynta dadka ka qaxaya | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Xulshada Wararkii ugu dambeeyay ee dalka Afghanistan oo weli uu ka socdo daadgureynta...
Wararkii ugu dambeeyay ee dalka Afghanistan oo weli uu ka socdo daadgureynta dadka ka qaxaya
Diyaarado siday boqolaal qof oo laga soo daadgureeyay Kabul ayaa gaaray wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka iyadoo waddamada reer Galbeedka ay sare u qaadeen dadaallada daadguraynta inkastoo Taliban ay ballanqaaday xuquuqda haweenka, xorriyadda warbaahinta iyo cafiska saraakiisha dowladda Afghanistan.
Diyaaradda British Air Force oo ay la socdeen muwaadiniin British ah iyo shaqaalaha safaaradda ayaa ka degtay saldhigga cirka ee Oxfordshire, UK, halka dowladda Jarmalka ay kireysatay duulimaadkii Lufthansa oo siday 130 qof oo laga soo daadgureeyay magaalada Frankfurt ee Jarmalka.
Mareykanka ayaa sheegay in duulimaadyadiisa milateri ay Kabul ka daadgureeyeen 3,200 oo qof oo ay ku jiraan 1,100 Talaadadii oo kaliya.
Boqortooyada Ingiriiska ayaa lagu wadaa inay ku dhawaaqdo qorshe ay ku soo dhaweyneyso ilaa 20,000 oo reer Afgaanistaan ​​ah oo ku hoos jira barnaamij cusub oo dib -u -dejin ah oo mudnaanta koowaad siin doona haweenka, gabdhaha iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay, sida ay qoreen wargeysyada Ingiriiska.
Dhinaca kale, Madaxweyne kuxigenkii Afghanistan Amrullah Saleh, oo u ahaa kuxigeen Madaxweynihii baxsadey ee Ashraf Ghani, ayaa sheegay inuu isagayahay madaxweynaha kumeel gaarka ee dalka.
Saleh, ayaa farriin cod ah uu soo duubay waxa uu ku xaqiijiyey inuu isagu jooggo Afghanistan, isagoo intaa ku darey in aanu dagaalku dhammaan.
Si lama filaan ah ayey Taliban ula wareegeen caasimadda Afghanistan ee Kabul. Dalalka caalamka ayaa walaac waxa ay ururkani ka damacsan yihiin dalkani.
Afhayeenka Taliban, kaasoo qabanayey shirkiisii jaraa’id ee uggu horeysay, ayaa sheegay in dhammaan jihooyinka xuduudaha ay iyagu gacanta ku hayaan.
Soo shaac bixista Madaxweyne kuxigeenkii hore farriintiisa, ayaan la ogeyn waxa aykaga jawaabi doonaan ururka Taliban.
dhinaca kale,Haweenka ka shaqeeya Tv-yada dalka Afghanistan, ayaa shaqooyinkii dib uggu noqdey, ka gadaal markii talada dalkani, ay si buuxda ula wareegeen ururkaTaliban.
Tv-ga la yiraahdo Tolo, ayaa dib u hawl galey, iyadoo haweenka ka shaqeeyana ay hawlahoodda u wataan sidii caadiga aheyd.Tv-ga ayaa si ku meel gaar ah hawada loogga saarey, markii uu is badalku dhacey.
Tv-ga Tolo News, ayaa intaa ku darey in baahintoodii ay sidii caadiga aheyd u shaqeyn doonto haatan wixii ka danbeeya.
Shirkii jaraa’id ee uggu horeeyey ee ay qabtaan Taliban, illaa iyo intii ay xukunka la wareegeen, iyagoo kaga jawaabey mawduucyo fara badan. Kuwa uggu waa weyn, waa sidan soo socota:
Kooxdu waxey si deg deg ah ugga shaqeyneysaa dhisidda dowlad, waxaa lagu dhawaaqi doonnaa marka la dhameystiro, sida uu sheegay afhayeenka Taliban, Zabihullah Mujahid,.
Wuxuu sheegay in haweenku ay kaalin mug leh ka qaadan doonaan bulshada dhexdeeda, loonna oggolaan doono iney shaqeystaan, iyadoo loo eegayo hannaanka nolosha ee sharciga Islaamka, laakiin ma aanu sharaxin waxa taa loola jeedo ficil ahaan.
Previous articleMaamulka Galmudug oo ka hadlay dagaalo ka dhacay Koofurta Mudug
Next articleSiciid Abshir: “Habraaca ma diidanin balse waqtigiisa lama joogo”.
Maxay tahay mudnaanta gaarka ah ee Madaxweyne Qoorqoor ku dhexdhexaadinayo Farmajo iyo Roble?
Fahad Yaasiin oo u Jawaabay RW Rooble.
Muslim Aid Country Office (MASCO) invites tenders/Bids for the provisions of Qurbani shares for beneficiaries in Mogadishu